चितवन संयुक्त सभामा कांग्रेस नेताहरूकाे आशंका : प्रचण्डले फेरि धोका दिने पो हुन् कि
चितवन । भरतपुर महानगरपालिका उम्मेदवारहरूका लागि पाँच दलीय गठबन्धनले चुनावी सभा आयोजना गर्‍यो । उक्त सभामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसहित पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरे ।
सभामा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको बाहुल्यता थियो । जसमा बोल्ने अधिकांश कांग्रेस नेताहरूको चिन्ता एउटै थियो- प्रचण्डले फेरि धोका पो दिने हुन् कि !
उनीहरूको चिन्ताको विषय किन भयो ? त्यसका लागि २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनतर्फ जानुपर्छ । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा भरतपुर महानगरमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल भएको थियो । जहाँ माओवादीबाट रेणु दाहालले मेयर जितिन् भने उपमेयरमा कांग्रेसबाट पार्वती केसी विजयी भइन् ।
‘नेताज्यूहरुले यो गठबन्धन निरन्तर जान्छ भन्ने प्रतीज्ञा गर्नुपर्‍यो, तब मात्र चितवनका जनताले विश्वास गर्छन् । तपाईंहरूले यो गठबन्धन निरन्तर लाने प्रतिज्ञा गर्नुस् । हामी तलका कार्यकर्ता तपाईंहरुको पछि पछि लाग्छौं,’ उनले भने ।
माधव नेपालको टिप्पणी- केपी ओलीले गफमा विद्यावारिधि गरे निर्वाचन आयोगले क–कसलाई सोध्यो स्पष्टीकरण ?